The Ab Presents Nepal » अस्पतालमा कुरुवा बसेको नाटक गरि नवजात बच्चालाई चोर्ने २ महिला पक्राउ!
अस्पतालमा कुरुवा बसेको नाटक गरि नवजात बच्चालाई चोर्ने २ महिला पक्राउ!
सुनसरी -: नवजात शिशु चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुईजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसूति विभागबाट नवजात शिशु चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले धरान–१५ की लीला बिक र उनकी भाउजू मिना लिम्बू विकलाई प्रक्राउ गरेको हो ।
डीएसपी न्यौपानेका अनुसार नवजात शिशुका आमा बबिता राति बिउँझिदा आफ्नो साथ बच्चा नभएको देखेपछि हल्ला भयो । तत्काल डाक्टर, नर्स र प्रहरीले खोजी गर्न थाले । त्यसैबेला शंकास्पद रूपमा वार्ड बाहिर सुतिरहेकी लीला बिक फेला परिन् । न्यौपानेले भने, ‘केरकार गर्दा सुरुमा त लिलाले आफू अचेत भएजस्तो बहाना गरिन् । तर, उनको मोबाइलबाट कल गएको र आएको तथ्यले उजागर गर्‍यो ।लिलाको मोबाइलमा आएको पछिल्लो नम्बरमा एक चिकित्सकले डाक्टरले डायल गर्दा फोन उठाउनेको नजिकै बच्चा रोएको आवाज सुनेपछि लिलालाई सोधखोज गर्दा चोरी भएकै पत्ता लागेको थियो ।
डीएसपी न्यौपानेले भने लिलाले आफ्नो भाउजू मिनालाई बोलाएर मेहताको नवजात बच्चा चोरी गरी टेम्पोमा पठाएकी रहेछ । मिनाले बच्चा बगरकोट पुर्‍याएकी रहेछन् । बगरकोटबाटै प्रहरीले बच्चा फेला पारेर मेहता दम्पतीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मेहता दम्पतीले आफ्नो बच्चा चोरी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएको प्रनाउ न्यौपानेले बताए ।